Izindaba - I-Aluminium Toolbox
Aluminium ingxubevange ibhokisi lamathuluzi ngomunye wemikhiqizo yemikhiqizo yebhokisi le-aluminium. Luhlobo lwebhokisi olwakhiwe ngezinto ezibonakalayo ze-aluminium ukufeza ukusetshenziswa kokubeka amathuluzi namathuluzi wokulinganisa. Ngokuhlukile kwamanye amabhokisi amathuluzi, leli bhokisi lamathuluzi line-aluminium alloy. Izici zento enesisindo esincane, kulula ukuzicubungula, futhi zinezinzuzo ezingenakuqhathaniswa nezinye izinto ngokwamandla.
Amacala e-Aluminium, amabhokisi wamathuluzi e-aluminium alloy, amabhokisi we-aluminium alloy, amabhokisi ezokwelapha, amabhokisi wokubonisa namanye amabhokisi okupakisha umkhiqizo we-aluminium, imikhiqizo yeYuhang Chassis Factory ifaka: amacala ezimonyo, amacala obucwebe, amacala e-CD, amacala we-chip, ibhokisi lephasiwedi, ibhokisi lesaluni yobuhle , ibhokisi lezokunakekelwa kwempilo, ibhokisi lensimbi elenziwa ngokunembile, ibhokisi le-laptop, ibhokisi lewashi, ibhokisi lamathuluzi, ibhokisi lemishini enezithombe, ibhokisi lezinhlelo zokusebenza, ibhokisi lezinsimbi zomculo, ibhokisi lekilabhiliyadi, ibhokisi lesudi yegalufu, ibhokisi lemali lasebhange, Ibhokisi lemali, ibhokisi lokosa , ibhokisi lewayini, ibhokisi lamagiya okudoba, ibhokisi lesipho, ibhokisi le-acrylic, amalayili ahlukahlukene wokushaqeka, njll.
Umzimba omkhulu womkhiqizo wenziwe ngamaphrofayili we-aluminium alloy esezingeni eliphakeme, anezici zokuklanywa okufanele, isakhiwo esiqinile nokubukeka okuhle. Isetshenziswa kabanzi kumathuluzi, amamitha, i-elektroniki, ukuxhumana, i-automation, izinzwa, amakhadi ahlakaniphile, ukulawula izimboni, imishini yokunemba nezinye izimboni. Kuyinto yezinsimbi ezisezingeni eliphakeme IKhabinethi ekahle.
Aluminium box [aluminium alloy tool box] Welding
(1) Khetha ucingo lokushisela
Ngokuvamile khetha izintambo zokushisela i-aluminium ezimsulwa ezingama-301 kanye nocingo lwe-311 aluminium silicon welding.
(2) Khetha indlela yokushisela nemingcele
Imvamisa yenziwa ngendlela yokushisela yangakwesobunxele, futhi ithoshi lokushisela kanye nocezu lomsebenzi lwakha i-engeli engama-60 °. Lapho ukushuba kwe-welding kungaphezu kwe-15mm, kusetshenziswa indlela eyi-welding efanele, futhi ithoshi lokushisela ne-workpiece kwakha i-angle engu-90 °.
(3) Ukulungiselela ngaphambi kokushisela
Sebenzisa izindlela zamakhemikhali noma zemishini ukuhlanza ngokuqinile ifilimu ye-oxide ebusweni ezinhlangothini zombili ze-weld groove.
Ukuhlanza ngemishini kungasebenzisa ukusika imishini yomoya noma kagesi, ama-scrapers, amafayela namanye amathuluzi. Kumafilimu amancane e-oxide, amabhulashi wocingo we-0.25mm nawo angasetshenziswa ukususa amafilimu e-oxide.
Ukushisela kwenziwa ngokushesha ngemuva kokuhlanzwa. Uma isikhathi sokugcina sidlula amahora ama-4, kufanele siphinde sihlanzwe.
(4) Izici ze-aluminium ne-aluminium alloy materials emabhokisini e-aluminium
I-Aluminium iyinsimbi ekhanyayo esiliva emhlophe ene-plasticity enhle, ukuqhutshwa okuphezulu kagesi nokushisa, futhi inamandla okumelana ne-oxidation nokugqwala. I-Aluminium ifakwe i-oxidized kalula ukukhiqiza ifilimu ye-aluminium oxide, okulula ukuyikhiqiza inclusions ku-weld, ngaleyo ndlela ichithe ukuqhubeka nokufana kwensimbi, kunciphise izakhiwo zayo zomshini nokumelana nokugqwala.
(5) Ubunzima bokushisela i-aluminium ne-aluminium alloy materials kumabhokisi e-aluminium
Kulula kakhulu ukufaka i-oxidize. Emoyeni, i-aluminium ihlanganiswa kalula ne-oxidation ukwakha ifilimu eliminyene le-aluminium oxide (ukushuba okungaba ngu-0.1-0.2 μm), elinendawo encibilika kakhulu (cishe ngo-2050 ° C), elidlula kakhulu iphuzu lokuncibilika kwe-aluminium ne-aluminium alloys ( cishe ama-600 ℃). Ubuningi be-aluminium oxide bungu-3.95-4.10g / cm3, okucishe kube izikhathi eziyi-1.4 kune-aluminium. Ingaphezulu lefilimu ye-aluminium oxide kulula ukuncela umswakama. Lapho i-welding, ivimbela ukuhlangana kwezinsimbi eziyisisekelo, futhi kulula ukwakha ama-pores, i-slag, neziphambeko ezinjengokungabikho kwe-fusion, okudala ukonakala kokusebenza kwe-weld.
I-Aluminium alloy yenziwa nge-aluminium emsulwa ngokungeza ezinye izinto ezixubayo, njenge-aluminium-copper alloy, aluminium-zinc-magnesium-copper super hard aluminium alloy. I-Aluminium alloy inezici zesisindo esincane, izindleko eziphansi, izakhiwo zemishini (amandla afanayo), ne-aluminium alloy kulula ukuyicubungula futhi inezinga eliphezulu lokushabalalisa ukushisa. Ikakhulukazi ingxenye yenjini yemoto ilungele ukusetshenziswa kwe-aluminium alloy materials. Ngokuqondene nezimo eziningi zamakhompiyutha, kusetshenziswa ama-alloys e-aluminium-copper. Ikakhulu cabanga ukushabalalisa ukushisa. Ngoba ithusi ne-aluminium kuxubekile futhi kukhishwe, ukusebenza kokushabalalisa ukushisa kuhle impela, futhi abanye abalandeli bokupholisa amanzi be-CPU ephezulu basebenzisa le nto. Uhlobo lomzimba webhokisi usebenzisa i-aluminium alloy izinto ezikhishiwe nezesekeli ezihlobene. Ihlukile kwamanye amabhokisi wephrofayili, leli bhokisi lephrofayili le-aluminium linezici zempahla ye-aluminium alloy, isisindo esilula, ukucubungula okulula, umthamo oqinile wokuthwala umthwalo, ukubukeka okuhle, nesakhiwo sokwakheka okunengqondo. Ngenxa yezimpawu eziyingqayizivele zebhokisi lephrofayili ye-aluminium nokuqukethwe kwezobuchwepheshe okuphezulu nokuphakeme, idlala indima engcono ekuvikeleni umkhiqizo ngokuya nokusebenziseka okulula, futhi iyibhokisi elifanele lemikhiqizo ephezulu ephezulu.